ụdị na mma | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Naa: ụdị na ịma mma
Etu ị ga-esi felata
Ihe na 05.02.2020 05.02.2020
Etu puru ibu bu nsogbu ohuru na-emetụta otutu ndi uwa. Enwere ọtụtụ ọnụọgụ ụzọ dị iche iche ị ga - esi gbalịa iwepu nsogbu a, ọ bụ maka ha na ...
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ọ na-abụkarị n'oge opupu ihe ubi nke nwanyị (na ọtụtụ ụmụ nwoke) icheta na ịkwesịrị ifelata! Ejikọtara ọchịchọ a na anwụ na-achawanye ike, mgbanwe nke udu mmiri oyi ka nke kachasị mfe…
Rụba ibu dị ụtọ ma gbasie ike
Ihe na 03.01.2020 03.01.2020
Otu ụzọ dị mma isi felata ibu bụ usoro Dr. Gavrilov. Mgbakwunye ibu na-agụnye ọtụtụ nkebi. N’ezizi n’uche ihe gbasara uche gi, imebi ihe banyere uche gi; Mụta ...
Kedu ihe kpatara ị appleụ apụl cider mmanya na mmanụ a honeyụ maka ịbelata
Ihe na 26.09.2019 26.09.2019
Ihe a na-akpọ nri mmanya, mgbe slimming na-atụ aro ị drinkụ mmanya cider mmanya na mmanụ a honeyụ, ọtụtụ na-enwe obi abụọ. Anyị ga-anwa ịchụpụ obi abụọ gị ma kọwaa ihe mere ezigbo ihe ọ preparedụ drinkụ kwadebere ji arụ ọrụ ...
Hoodie maka ụmụ nwanyị: foto, nkọwa. Ihe na-eyi na hoodie
Okwu a "slim" abughi otu mgbọrọgwụ na okwu a "tara" ma "felata." Agbanyeghị na nhọrọ ziri ezi, uwe ọ bụla nwere ike ịmị amị. N’ezie, o sitere n’oduu Bekee - “hood”. Womenmụ nwanyị dị ọcha ...
Switzerland ese Panerai: foto, nyocha
Ihe na 15.09.2019 12.10.2019
Giovanni Panerai mepere ụlọ ahịa mbụ ya na Florence na 1860. Mgbe ahụ ọ ka nwere ike ghara ịtụ anya na ha ga-emeri ụdị ịhụnanya na ihe ịga nke ọma a, ọ bụghị naanị na intali, mana ...
Akpụkpọ ụkwụ Mifer na-ewu ewu, grik akụkụ sitere na onye nrụpụta
A na-anọchi anya akara Mifer nke nnukwu akpụkpọ ụkwụ ụmụaka. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2009. N'ime oge niile nke ịdị adị, na nke a bụ afọ asatọ, ika ahụ jisiri ike merie akụkụ dị mkpa nke ahịa Russia. Ha niile ...
Onyinye DIY maka ubochi ndi nkuzi. Ekike okike, klaasị klaasị
Omenala nke ikele ndi nkuzi na ezumike ndi oru ha adiwo ogologo oge. Na oge ọ bụla, ụmụ akwụkwọ ahụ na ndị mụrụ ha na-eche ajụjụ banyere ihe ha ga-eweta. Ọtụtụ na-ahụta ifuru na ihe na-atọ ụtọ dị ka ebe niile ...
Akpụkpọ ụkwụ Ascalini. Banyere akara na ngwa ahịa ha
Enweghị ike ịtụle ihe oyiyi ọ bụla zuru ezu ma ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ adịghị mma. Ọbụna na akwa a họọrọ nke ọma, ọdịdị ahụ agaghị enwe nkwekọ ma ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ adabaghị na nnukwu foto ahụ ...
Jaketị nke ala "Lamide": nyocha, ọnụahịa, ọkwa dị iche
Jaketị oge oyi nke oge a bụ ngwakọta nke ịma mma na ịdị irè. Ka a sịkwa ihe mere ha ji guzosie ike na ndụ kwa ụbọchị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla a na-amanye ichebe onwe ya pụọ ​​na oyi. Jaketị ala "Lamide", nyocha nke…
Uwe ụmụ nwanyị - usoro dị ugbu a!
Uwe ụmụ nwanyị bụ uwe zuru ụwa ọnụ. Onye obula nwere ihe di otua na akwa ulo ha nwere ike ghara iche maka uwe o ga-eyi. Uwe uwe ụmụ nwanyị na-aga n'ihu na ọkwa kachasị elu nke ewu ewu abụghịzi ...
Ntanetị azụ ahịa Tezenis. Pslọ ahịa na Moscow
Nghọta nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, Thezenis bụ ụlọ ahịa akwa. Nke a abụghị naanị mmejọ nkịtị. N’ezie, Thezenis bụ akara ụwa niile, nke pụtara ọ bụghị naanị akwa, kama…
Ọla ntị na rubi (foto)
Ndị ụlọ ikpe, ụmụ nwanyị ọkara ụwa, ndị isi nke ọbara, ndị eze, ijeri ndị ochie na ụwa ọhụụ, kpakpando Hollywood - ha niile hụrụ nkume dị egwu n'anya: diamonds na agba, emerad, sapphires, rubi na pel ...
Ihe eji akpụ akpụ Ice maka akpụkpọ ụkwụ: nyocha, atụmatụ ije na ụdị
Oge oyi abịawo, oge maka ịchọ mma ekeresimesi, ọkụ ihunanya na-ekpo ọkụ na-ada site na mbara igwe nke ikuku nwere. Agbanyeghị, n'oge na-adịghị anya akụkọ mmuta anaghị aghọrọ ịbụ akụkụ kachasị amasị ya: n'ihi ọdịiche okpomọkụ, ụzọ na-atụgharị, n'ụzọ nkịtị, ...
Ncha ntutu maka ntutu ojii: ndị na-emepụta ihe, palette
Ọ ga - adị ka mma ịcha ntutu dị mfe karịa ilekọta onwe ha karịa ifuru agba aja aja. Ọchịchị gbara agba na -emebi obere ntutu, regrowth na mgbọrọgwụ ahụ abụghị ihe a na-ahụ anya, na ịhọrọ ndò dị mma kachasị mfe. Ọ bụ ...
Pụtara maka mweghachi ntutu n'ụlọ. Ngwọta kachasị mma maka mweghachi ntutu
Ihe na 15.09.2019 31.10.2019
Ylekpụ ntutu mara mma bụ nrọ nwa agbọghọ ọ bụla, mana otu ịke akwa anaghị ezuru iji nweta ebumnuche. Iji mee ka curls na-acha mara mma ma na-acha odo odo, ha kwesịrị nlekọta kwesịrị ekwesị. Kedu ihe kacha mma ...
N'ime ọtụtụ ọgwụ a na-eji na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, ikekwe otu n'ime ndị a ma ama bụ ude "Dawn". N'ihi gịnị ka ọgwụ a maka anụmanụ ji bụrụ ihe ewu ewu n'etiti ndị mmadụ? Nke mbu, obere banyere ogwu ogwu ya ...
Mannequin isi maka edozi isi. Etu ịhọrọ otu nke dị mma?
Ihe na 15.09.2019 06.01.2020
Isi nke mannequin maka edozi isi bu ngwa oru maka ndi na-edozi ntutu nke ozo. Ndị mbido ga-enwe ike ịmụta ịme ntutu isi ọ bụla, ịkpụ ya mma, na ndị nna ukwu nke aghụghọ ha - iji nwalee ma pụta na ndị ọhụrụ, n'atụghị egwu ...
Nkpuchi Keratin maka ntutu: nyocha, ọnụahịa
Ihe na 15.09.2019 22.11.2019
Dreamfọdụ nrọ maka ntutu dị ogologo, ụfọdụ nrọ ị na-achọ curls, na mmadụ megburu onwe ya site na ọgbaghara “okike” dị na isi ha na ụda ọgbụgba. Ọtụtụ, ma eleghị anya, nụrụ na enwere keratin mask kwụ ọtọ maka…
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,874.